Ahoana ny fomba hamoronana tetikady goavana tsara indrindra ho an'ny tranokalanao?
Ity lahatsoratra ity dia natao hametrahana valiny amin'ny iray amin'ireo fanontaniana be fanontaniana indrindra "Ahoana no ahafahana mamadika tranonkala iray?" Maro ireo paikady fananganana rohy ahafahantsika mamorona rohy mankany amin'ireo tranokala hafa mifandraika amin'ny niche. Na izany aza, tsy ireo rehetra ireo dia azo antsoina hoe organika. Raha ny tena marina, tsy misy tetikady fanorenana rohy tokana, izay mifototra amin'ny fomba voajanahary fotsiny. Ho an'ny vohikala sasany, tetikady iray dia afaka manome vokatra SEO tsara ary manome fifandraisana tsara amin'ny fifandraisana. Ny fomba fisainana hafa ho an'ny hafa dia mety tsy ho hita velively ny laza tsaratsara na tsia.
Rehefa mandeha ny fotoana dia mitombo ny paikady fanorenana mifandraika amin'ny sehatry ny fantsom-pivoarana ho toy ny mahomby kokoa. Ny rohy teknika manamboatra dia afaka miasa tsara mandritra ny fotoana fohy, ary avy eo manomboka manova ny mpisera ny mpiserasera ka tsy maintsy miova ny paikady.
Ahoana ny famolavolana tetikady fanorenana rohy?
Mba hamoronana ny paikady fanorenana rohy, dia mila mijery manodidina ny tetikady samihafa indrindra ianao eo amin'ny tsenanao. Hamarino avokoa ny rehetra mba hahalalan'izy ireo izay tena miasa tsara indrindra amin'ny orinasanao an-tserasera. Mandehana izay asa sy andramo hevitra vaovao. Sakafo mandrakariva ny fananana tetik'asa fananganana fifandraisana an-dalam-pivoarana satria manome anao fahafahana hamorona profil-rohy voajanahary. Satria ny tsena dizitaly dia sehatra tsy azo ovaina, dia mety ny manohy manandrana fomba vaovao.
Nahoana no mampidi-doza ny mampiasa programa fanorenana rohy?
Amin'izao fotoana izao dia misy fandaharanasa fanorenana rohy izay natao mba hampandrenesana ny volanao. Mampanantena ireo webmasters izy ireo hamorona lamosina an'arivony an'arivony avy amin'ny tranonkala avo vaventy ao anatin'ny fotoana fohy. Ireo olona izay manana traikefa amin'ny tetikasam-panatontosana fikarohana dia mahafantatra fa tsy azo atao ary tsy dia tsara loatra ny manamarika fa marina. Raha ny marina, ny dingan'ny fananganana rohy dia mila volana maromaro ary mitaky asa mafy. Na dia miasa aza ny rafitra fananganana spammy, amin'izao fotoana izao, Google dia mety hahatsikaritra azy io ary mety hitranga, na mety hiharatsy kokoa ny tranokalanao amin'ny sazy mafy. Izany no antony ilainao hisorohana ny tetika toy izany ary mifantoka amin'ny paikady fanorenana rohy.
Backlinks organiques mila anao!
Backlinks voajanahary dia rohy izay tsy mahazo mangataka olona mba hametraka rohy amin'ny tranokalanao. Amin'ny ankapobeny, mahazo rohy toy izany ianao raha tsy fantatrao. Tena mora izany. Ohatra, ianao dia mahita lahatsoratra tianao ary mampifandray izany amin'ny tranokalanao. Tokony hahafantatra ianao fa tia ny rohy voajanahary i Google ary mamaly ireo tranonkala izay mamorona azy ireo amin'ny laharana ambony amin'ny pejy valin'ny fikarohana. Izany no mahatonga ity karazana rohy ity ho azo antoka indrindra. Azonao antoka fa azonao antoka fa tsy ho levona velively amin'ny Google izany.
Link building izay miasa irery
Ny tompon'ny tranokala tsirairay dia mitady tetikady fanorenana rohy izay afaka miasa raha tsy mifantoka manokana. Raha te-hahita tetikady izay tsy mitaky ny asa tsy tapaka ianao amin'ny fahazoana rohy tsirairay, ny bilaogy no fotoana tsara indrindra ho anao. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mamorona bilaogy mifototra amin'ny sehatry ny sehatra indostrianao ary mametraka lahatsoratra tsy tapaka izay hahasoa ny mpampiasa. Raha afaka manome ny votoaty mahasoa ho an'ny mpampiasa ianao, dia hampifandraisina amin'ny lahatsoratrao izy ireo ary hamorona rohy misy rohy mankany amin'ny tranokalanao Source .